ကူညီပါရစေ အပိုင်း (၉) | HapEye
ကူညီပါရစေ အပိုင်း (၉)
Hnin Oo Wai
ကူညီပါရစေ အပိုင်း (၉) – လူအများ ထိခိုက်မှာစိုးလို့ တာဝန်သိသိ လုပ်ခဲ့တာကို ဘာကြောင့်ဖမ်းရသလဲဟု နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ ရဲစခန်းရောက်မှ သဘောပေါက်သည်။ ခုကိစ္စမှာ အုတ်ခဲကျိုးနှင့် ဘာမျှမဆိုင်။
ဖြစ်ပုံက အိမ်ရှင်တွေ အပြင်သွားနေတုန်း အိမ်တစ်အိမ်ကို လူနှစ်ယောက်က ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သည်။ သူတို့လုပ်ပုံက ပိပိရိရိ ရှိလှသည်။ ရွှေငွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ငွေများ ရှာဖွေယူပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ရေခဲသေတ္တာကြီးကို အိမ်ရှေ့ပေါက်မှတစ်ဆင့် ခပ်တည်တည် မ ထုတ်လာသည်။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးလည်းဖြစ်၊ လူမြင်သူမြင် မှင်သေသေ လှုပ်ရှားသွားသောကြောင့် ဘယ်သူကမှ မသင်္ကာမဖြစ်မိ။ တစ်ခုပဲရှိသည်။ ရေခဲသေတ္တာကြီးက သူတို့ထင်တာထက် ပိုလေးနေသည်။ ထို့ကြောင့် မနိုင့်တနိုင် ဖြစ်နေတုန်း အောင်ဘာလေက ကူပြီး သယ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
သူခိုးများ ထွက်သွားပြီးနောက် မကြာခင်မှာပင် အိမ်ရှင်၏ဇနီး မိန်းမကြီးမှာ ဈေးဝယ်ရာမှ ပြန်လာသည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးကြီး ပွင့်နေတာ မြင်ကတည်းက ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ရာ သူခိုးဖောက်သွားကြောင်း သိရသည်။ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသဖြင့် လူအချို့ ရောက်လာသည်။ ဖြစ်ပုံသိရသောအခါ အုတ်ခဲကျိုး ကိုင်ထားသူက ရေခဲသေတ္တာကို လူသုံးယောက်သယ်၍ ကားပေါ်တင်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်သည် အအေးဆိုင်ထဲမှာ ရှိသေးကြောင်း ပြောသဖြင့် အောင်ဘာလေကို ဖမ်းမိသွားခြင်းဖြစ်၏။ ရဲက အောင်ဘာလေကို စစ်ဆေးသောအခါ သူ ဘာမှမသိရကြောင်း လူနှစ်ယောက် ရေခဲသေတ္တာကို မနိုင်မနင်း သယ်နေတာတွေ့ရ၍ ရိုးရိုးသားသား ဝင်ကူညီခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
ခက်နေတာက မျက်မြင်သက်သေ (အုတ်ခဲကျိုးနှင့်လူ) ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ အောင်ဘာလေက တစ်ဘက်မှ လျှောက်လာကြောင်း၊ ကျန်လူနှစ်ယောက်က ရေခဲသေတ္တာ သယ်လာကြောင်း၊ ထို့နောက် အောင်ဘာလေနှင့်ဆုံပြီး သုံးယောက်အတူ သယ်ကြကြောင်း၊ ကားပေါ်တင်ပြီးနောက် နှစ်ယောက်က ကားနှင့်ထွက်သွားပြီး အောင်ဘာလေက နေခဲ့ကြောင်း၊ ကားထွက်သွားသောအခါ အောင်ဘာလေက လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်သေးကြောင်း။ အထက်ပါ ထွက်ဆိုချက်အရ အောင်ဘာလေသည် ဖောက်ထွင်းသူများနှင့် တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်စရာ အကြောင်းရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် အောင်ဘာလေကို ဆက်ချုပ်ထားလိုက်၏။
အိမ်တစ်အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုဖြင့် အောင်ဘာလေ အဖမ်းခံရကြောင်း ကြားသိရသောအခါ တစ်ရပ်ကွက်လုံး အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် ဖြစ်သွားသည်။ အောင်ဘာလေ၏ အကြောင်းကို သိနေသဖြင့် ဒါတခြားလူအတွက် ဓားစာခံရတာပဲဆိုတာ သိနေကြ၏။ အောင်ဘာလေ၏ မိဘများနှင့် ဦးကုလားတို့ ရဲစခန်းလိုက်သွားကြသည်။ အာမခံရဖို့ကိစ္စ သွားပြောသည်။ ဦးကုလားက လိုအပ်လျှင် သူ အာမခံပါမည်ဟု ပြောသည်။ လောလောဆယ် အာမခံပေးလို့ မရသေးကြောင်း ရဲစခန်းက ပြောလိုက်၏။ ညနေကျတော့ သူတို့ရပ်ကွက် ရယကအဖွဲ့ဝင်များ ရောက်လာပြီး အောင်ဘာလေမှာ ဒီလိုအလုပ်မျိုး လုပ်မည့်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ အလွန်ကောင်းသည့် လူရိုးလူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံကြပြန်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲက လူများကလည်း အောင်ဘာလေတစ်ယောက်တော့ အားငယ်နေတော့မှာပဲ ဆိုပြီး စခန်းကို လိုက်လာကြသည်။ မုန့်ဝယ်လာသူ၊ ဆေးလိပ်လာပေးသူများဖြင့် ရဲစခန်းတစ်ဝိုက်မှာ စည်ကားနေသည်။ တချို့မိန်းမတွေကလည်း အချုပ်ခန်းနား သွားနှုတ်ဆက်ခွင့် မရသဖြင့် စခန်းနောက်ဘက်မှ ပတ်၍ ‘အောင်ဘာလေရေ … ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ဟေ့’ ဟု အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထိုမျှ မကသေး။ အောင်ဘာလေ ဆေးရုံမှာ သွားပြုစုခဲ့သူသည် ဆေးရုံမှ ဆင်းလာပြီး ထော့နဲ့ထော့နဲ့နှင့် ရောက်လာသေးသည်။ အောင်ဘာလေ အိမ်သာတွင်းထဲက ဆယ်ပေးခဲ့သော ခွေးကလေးပိုင်ရှင် ချာတိတ်၏ ဖခင်မှာ ရှေ့နေဖြစ်၏။ သူကလည်း သတင်းကြားသဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး အားပေးစကားပြောရင်း လိုအပ်လျှင် သူ့အနေဖြင့် အခမဲ့ ရှေ့နေလိုက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ စခန်းမှူးအနေဖြင့် အောင်ဘာလေနှင့် ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာသည်။ သည်လောက် အာမခံချင်သူ ပေါများသော တရားခံမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးသေး။ ပြီးတော့ အောင်ဘာလေ၏ ပုံစံမှာလည်း ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတစ်ယောက်နှင့် လုံးဝမတူ။ သည်အမှုမှာ အောင်ဘာလေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ ဖြစ်လာ၏။ ထိုမျှမက …
မင်းလူ ရေးသားထားသော ရယ်မောခြင်းလက်ကျန် စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်အခြေအနေဆိုင်ရာ ဒိုင်ယာရီတစ်ခု ထားရှိပါ။
လူများစွာတို့က ဒိုင်ယာရီထဲတွင် နေ့စဉ်ရေးမှတ်ခြင်းကို ရင်ဖွင့်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် တွေ့မြင်ကြသည်။ ဤဆောင်ရွက်ချက်ကို နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ပြီး . . .
Knowledge is Power လို့ ပြောတဲ့လူက ပြောတာပဲ။ ဒါကို အလွတ်ကျက်မှတ်ထားပြီး အခမ်းအနားတွေဘာတွေမှာ အမှာစကားပြောတဲ့ လူကြီးမင်းတွေကလည်း Knowledge is Power တို့ Knowledge ခေတ် ရောက်နေပြီတို့ လျှောက်ပြောတာပဲ။
သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုစိတ်ချမ်းသာစေရန်အလို့ငှာ ပထမဆုံး သင့်ကိုယ်သင်နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ရှုပ်နေသောဘဝပုံစံက မိမိကိုယ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့အတွက် . . .
ငါ့အတွက် ငါရှိတယ် … ရောင်နီကို မြင်တွေ့ရဖို့ မနက်ခင်းတွေအတွက် ကိုယ်ရှိနေဖို့လိုတယ်။ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ရှိနေတာ သိဖို့လိုတယ်။
မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစုကို စကားပြောပါ။
အိပ်ချင်နေပါလျက်နဲ့ တမင်မအိပ်ဘဲ နေလိုက်မယ်ဆိုရင်
ကံကြမ္မာကို ယုံကြည်သူ (အပိုင်း ၃၊ ၄)
Website Security for WordPress
ဂျပန်ကို ပထမအဆုံးအကြိမ်သွားရင် ကြုံတွေ့ရမယ့်အချက်များ
ကံကြမ္မာကို ယုံကြည်သူ (အပိုင်း ၁၊ ၂)
Domain extensions များအကြောင်း
© Copyright 2021. All Right Reserved & Powered by Hap Eye Co., Ltd.